10 Siyaabaha Loo Diiwaangelinayo Xusuusta Safarka | Save A tareenka
Guriga > Talooyin ku Socda > 10 Siyaabaha Loo Diiwaangelinayo Xusuusta Safarka
Socdaalku waa hab fantastik ah oo lagu ogaanayo dhaqamada, meelaha, iyo dadka. Marka aan safrayno waxaan baranaa wax badan oo mararka qaarkood ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn in la xasuusto dhammaan meelaha iyo waxyaalihii waaweynaa ee aan sameynay. Si kastaba ha ahaatee, kuwan 10 siyaabaha loo diiwaan geliyo xusuusta safarka ayaa ka dhigi doona xusuustaada mid waligeed noolaato, qalbigaaga, iyo guriga. Laga soo bilaabo buug-gacmeedka ilaa warbaahinta bulshada, waxaa jirta hab la yaab leh oo qof kasta oo socotada ah uu dib ugu soo nooleeyo daqiiqadaha mar kasta oo aad rabto.
1. Siyaabaha Loo Diiwaangelinayo Xusuusta Safarka: Joornaalka Socdaalka
Qoritaanka sheekooyin yar oo kaaga safarka Talyaaniga, ama beerta biir ee Prague, iyadoo la xasuusan yahay sida qorraxdu maalintaas u dhalaalaysay, ama dhadhanka biirka sababtoo ah waa waxyaabaha yaryar ee safarka ka dhigaya mid aan la ilaawi karin. Haysashada joornaalka safarka waa hab fiican oo lagu diiwaangeliyo xusuustaada safarka.
Qoraal maalinle ah oo ku saabsan joornaalka safarka, ama waqtiyo gaar ah, waa adiga oo dhan. Qaarkood waxay ku raaxaystaan ​​inay qoraan soo koobida waxyaabaha ugu muhiimsan ee maalinta, dhamaadka maalinta, halka qaar kalena ay siteen buug yar oo xusuus qor ah, si ay u awoodaan in ay diiwaangeliyaan wax kasta marka ay dhacaan haddii ay jirto u janjeera in la iloobo magacyada meelaha, iyo dadka, dhacdooyinka. Sidee cajiib ah ayay u tahay in la dhex geliyo joornaalka safarka ee guriga, ama xitaa meel kale oo safarkaaga ah, oo xasuuso dadka cajiibka ah ee aad la kulantay, iyo meelaha la booqday, oo runtii arag inta aad soo safartay.
2. Abuur Buug Iskaraab Safar ah
Isku dhafka sawirada, kaararka, khariidadaha, ama kaararka boostada ee buug-gacmeedka lagu dhejiyo waa hab madadaalo leh oo lagu diiwaangeliyo xusuusta safarka. Waxaa intaa dheer, if you are a creative person, markaa waxaad u badan tahay inaad abuurto buug-gacmeed cajiib ah. In a similar way, ah meelo aan la ilaawi karin waxaanu booqanaa waanu kobcinayna nolosheena waxaanan ku darnaa lakabyo aqoonsigeena dad ahaan, iyo socotada, oo sidaas oo kale lakabyada aad ku dari doonto buug-gacmeedka. Lakabyada dhejiska, xaashida qashinka, sawiro, iyo xasuus qoran, waxay ku dari doontaa qofka aad tahay, iyo dunidaada gudaha.
Intaa waxaa dheer, Buugaag-yaraantu waa hab fantastik ah oo lagula wadaagayo safarkaaga asxaabta iyo qoyska. Sheekooyinka safarkaaga waxay ku nool yihiin buug-yaro, daaqadaha aragtida, dhaqanka, bulshooyinka, iyo daqiiqado, xidho nolol midab leh, oo buug-gacmeedka ka dhigi kara tacabur, qarsoodiga, iyo buug soo jiidasho leh oo meelaha u keenaya dadka aan u safrin.
3. Nakhshad Albumkaaga Sawirka
Qorista waxay dadka qaar ku noqon kartaa caqabad; helida erayada saxda ah, ama awoodda inaad hakado inta safarka lagu jiro si aad wax u qorto. Si kastaba ha ahaatee, sawir qaadista waa sahlan tahay, degdeg ah, oo xiiso leh in la sameeyo marka safarka. Sidaa darteed, Albaabka sawirku waa hab aad u fiican oo lagu diiwaangeliyo xusuusta safarka.
Hal gujin waxaad ku qabsanaysaa quruxda xeebta Ireland ama Tuscany ee qorrax dhaca. Markaasuu, waxaad dooran kartaa sawirada gaarka ah, oo ku soo ururi albamka dhijitaalka ah, qoraalo yaryar leh, taariikhaha, iyo xasuusin yaryar oo kaa caawinaya inaad la wadaagto sheekada safarkaaga. Waxaa intaa dheer, albamka sawirku ma qaado meel aad u badan oo lagu kaydiyo, oo waxaad dul dhigi kartaa miiska qaxwada, ama u samee shelf gaar ah dhammaan albamada sawirka safarkaaga.
4. Siyaabaha Loo Diiwaangelinayo Xusuusta Safarka: Sawirro
Fadhiga beerta Versailles ama ku raaxaysiga Aragtida Xeebta Amalfi - 2 meelaha aan caadiga ahayn ee Yurub, waxaad helaysaa rabitaan degdeg ah si aad u qabato aragga quruxda badan. Sidaas, daqiiqadahaan oo kale, waxaad kala soo bixi kartaa buug-yaraha jeebka oo aad bilaabi kartaa inaad ka fogaato daqiiqadaha iyo meelaha kaa horreeya.
Iyadoo doodling uu u eg yahay hab aad u hal abuur leh oo lagu diiwaangeliyo xusuustaada safarka, qasab maaha in aad leedahay hibo sawir-gacmeed ama sawir-qaadis. Waxaa intaa dheer, sawiradaadu uma baahna inay la mid noqdaan kuwa Monet. Maadaama waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan muujinta xusuusta safarka ay tahay inay yihiin kuwo shakhsi ahaaneed, oo aad haysato shelf uu ka buuxo safarkaaga si aad u xasuusato socdaalada yaabka leh ee Yurub oo dhan.
5. Ururi Oo Soo Bandhiga Kaararka Boostada
Ku dheji qaboojiyaha, u samee collage qolka fadhiga, ama gidaar waxyi, kaararka boostada waa xusuus cajiib ah. Intaa waxaa dheer, kaadhadhku waa mid ka mid ah siyaabaha ugu sarreeya ee lagu diiwaangeliyo xusuusta safarka, way fududahay in la helo, waxayna u baahan tahay dadaal eber ah dhamaadkaaga. Waxaa lagu iibiyaa dukaan hadiyadeed kasta, iyo suuqa waddooyinka, kaadhadhku waa xusuus caan ah, si loo xasuusto safarka.
6. Siyaabaha Loo Diiwaangelinayo Xusuusta Safarka: Vlogging
Haysashada baloog muuqaal ah, ama si kale loo dhigo, vlogging waa hab aad u fiican oo lagu diiwaangeliyo xusuusta safarka, si uu u noolaado. Qabo kamarad, ama telefoon leh kamarad heer sare ah, oo samee akoon YouTube si aad u soo geliso fiidiyowyadaada safarka, Tacaburradaadu weligood way noolaan doonaan. Vlogging-gu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad doorato xayndaabyada ugu fiican, Sheekooyinka ka sheekee, oo qor daqiiqadaha - marka laga eego aragtidaada.
Waxaa intaa dheer, vlogging waa hab fantastik ah oo meelo lala wadaago aduunka. marka hore, vlogging waa shaqsi oo ma sido ajande suuqgeyneed oo qarsoon. Marka labaad, vlogging waxa ay tusinaysaa dadka xaqiiqooyinka aan caanka ahayn iyo sheekooyinka ka dambeeya meelaha caanka ah ee adduunka oo dhan. Sidaas, vlogging waa qalab fiican oo deegaanka ku habboon, kuu ogolaanaya inaad la wadaagto sheekooyin dhaqan gaar ah, lacag la'aan, iyo ajandaha, oo leh adduunyo socdaal.
Nooc kale oo vlogging ah iyo qaabka dhijitaalka ah ee joornaalka safarka waa blogging. Tirada blog-yada tooska ah maanta waa heer sare, si aad uga heli karto tusaaleyaal badan oo ah blog-yada safarka ee internetka haddii aadan hubin sida loo bilaabo safarkaaga blog. In kooban, Waxaad si fudud u bilaabi kartaa bloggaaga WordPress, soo geliyaan sawirada safarka, meelaha safarka ah, fikradaha, iyo in ka badan.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya blogging iyo joornaalka safarka waa in blogku yahay dhexdhexaad online ah, oo laga heli karo aduunka oo dhan mareegaha. Fikradahaaga gaarka ah waxay noqon karaan fayras, oo ay leeyihiin taageerayaal badan, taasi waxay jeclaan doontaa inay akhrido oo ay dhiirigeliso xusuustaada safarka.
8. Siyaabaha Loo Diiwaangelinayo Xusuusta Safarka: Instagram
Warbaahinta ugu awooda badan aduunka casriga ah waa baraha bulshada, iyo haddii la si sax ah, Instagram. maanta, waxaad soo gelin kartaa macluumaad kasta oo aad rabto oo ku saabsan meel kasta oo adduunka ah, Instagram-ka. Waxaa intaa dheer, bloggers safarka iyo saameeyayaasha safarka’ Sida ugu wanaagsan ee lagu kaydiyo xusuusta safarka waa iyada oo la shubo sheekooyinka, gariiradda, iyo qoraalada Instagram-ka.
Sidaa awgeed, samee naftaada bog Instagram midab leh oo madadaalo leh, si aad u diiwaangeliso safarradaada, iyo xasuus qaali ah. Bal qiyaas sida quruxda badan ee ay u eegayso bogga midabka leh, daawashada dhamaan muuqaalada gaaban, iyo sawiro aad qaadatay intii aad safarka ku jirtay, bilaha dhexdiisa, iyo xitaa sannadaha soo socda ka dib safarkaaga.
9. Abuur Sanduuqa Xusuusta
Maab, kaararka boostada, iyo tigidhada madxafku waa wax yar oo ka mid ah waxyaabaha qaarkeen jecel yihiin inay ka ilaaliyaan socdaaladayada badan ee aduunka. Waxaa la yaab leh sida warqad yar ama kaadh ay kuugu celin karto mayl fog, dhaqan ka duwan, jeer, iyo daqiiqado. Sidaas, halkii ay dhammaan xusuustaas quruxda badan ku lumin lahayd boorsada dhabarka, ama boorsada, Samaynta sanduuqa xusuusta waa hab fiican oo lagu diiwaangeliyo dhammaan xusuusta safarkan, kana ilaali inay waxyeelo soo gaarto.
Tusaale ahaan, waxaad qaadan kartaa kabo duug ah, qurxin, geli dhammaan xusuustaada safarka gudaha, dabadeed ku soo bandhig shelf. Fikrad kale oo loogu talagalay sanduuqa xusuusta ayaa ah in sanduuq laga sameeyo alwaax dib loo warshadeeyey, marka waa mid deegaan iyo hal abuur labadaba leh. Si kastaba ha ahaatee, sanduuqa xusuusta ayaa ka mid ah 10 siyaabo gaar ah oo lagu diiwaangeliyo xusuusta safarka.
10. Raad raac Dalxiiska Dalxiiska
Socdaal Nederlaan ah bilaabid Polarsteps waa hal tusaale oo ah sida aad u diiwaangelin karto xusuusta safarka ee adduunka tignoolajiyada degdega ah ee aan ku nool nahay. Appka Polarsteps wuxuu kuu ogolaanayaa inaad raacdo talaabooyinkaaga, fikradaha, fikrado, meelaha la booqday, iyo wax badan oo ka badan raaxada taleefankaaga, iyadoo hal gujis ah. Mid ka mid ah natiijada la yaabka leh ee la socodka safarkaaga waa albam sawir socdaal oo cajiib ah, dhamaadka, adiga ayaa naqshadeeyay oo aad samaysay, daqiiqadaha aad jeceshahay.
Si aad u soo gabagabeyn, siyaabaha kala duwan ee loo diiwaan geliyo xusuustaada safarka, laga bilaabo tallaabada ugu horreysa waa mid aan dhammaad lahayn. Laga soo bilaabo apps ilaa joornaalada safarka ee duugga ah iyo kuwa wanaagsan, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwan 10 siyaabaha kor ku xusan, dukumeenti, wadaag, oo dib u soo noolee safaradaada yaabka leh ee aduunka.
Waxaan ku Save A tareenka aad bay ugu farxi doontaa inay kaa caawiso inaad qorshayso safar aan la ilaawi karin oo Yurub ah, halkaas oo aad ka abuuri karto xasuus nololeed.
Ma waxaad rabtaa inaad dhejiso boostadayada blog-ka "10 Siyadood oo lagu diiwaangeliyo xusuusta safarka”Bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fways-document-travel-memories%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
DocumentTravelMemories	la soco safarkaaga	Xusuusta Safarka